Mayelana Nabadla Isikhathi Nendlela Yokubhekana Nabo - Psychology 2022
Mayelana Nabadla Isikhathi Nendlela Yokubhekana Nabo
Isikhathi singenye yezinsiza zabantu ezibaluleke kakhulu. Kunzima ukuphikisana nalokho. Futhi akuyona imfihlo kunoma ubani. Ngesikhathi esifanayo, kwenzeka ukuthi asinaki ngokufanele, futhi singanaki kakhulu "i-tick-tock, i-tick-tock" kanye nenkambo yayo.
Kwazwakala ngandlela thize njengamanje - ekwindla, lapho amahora okukhanya eqala ukuba mafushane ngokuphawulekayo, futhi ngifuna ukufika ngesikhathi, futhi ngidinga, kusekuningi.
U-Marina Makoviy usitshela indlela yokuthola isikhathi somsebenzi, umndeni, izintandokazi zomuntu siqu kanye nokugcwaliseka kwezifiso, kanye nokuthi "abadla isikhathi" bayini nokuthi ungabhekana kanjani nabo.
Empeleni, akuzange kumane kwaqondana nje ukuthi ngicabange ngesikhathi nokubaluleka kwaso ekuphileni kwethu. Kulula: Ngizibambe ngicabanga ukuthi ngandlela thize ngikwazile ukwenza okwengeziwe ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, futhi imiphumela ibibonakala kakhulu. Futhi lapha, nakuba ekwindla, nobuhle, futhi kusihlwa ethokomele emndenini ngemva komsebenzi ingoma yamathonsi emvula ngaphandle kwefasitela, kodwa ngandlela-thile konke akunjalo noma akunjalo. Khumbula, njengakwifilimu: "Kimi okufanayo, kodwa ngezinkinobho zamaparele."
Futhi ngifuna okwengeziwe: ukwenza okwengeziwe emsebenzini, ukunikela isikhathi esengeziwe emndenini wami, nokuzithokozisa ngezinto ezijabulisayo - ukufunda incwadi ethakazelisayo, ukuya ejimini, ukuya engqungqutheleni nokuxhumana nozakwethu, ukushintshanisa isipiliyoni, funda okuthile okusha kubo.
Kulokhu, wonke umuntu wakhumbula izinkinga ezifana chronophages. Ake sithole ndawonye ukuthi kuyini nokuthi singabhekana kanjani nazo, ngomqondo ongokomfanekiso, nokuthi kudingekile yini.
Ngakho-ke, noma ungazi ukuthi iyini i-chronophage, lokhu akusho nhlobo ukuthi yena (noma bona) akekho empilweni yakho. Igama elithi "chronophagus" lafika kithi kusukela ekuphathweni kwesikhathi, noma, kalula nje, "abadla isikhathi", into ekuphazamisayo ezindabeni ezibalulekile, ezidingekayo nezinenjongo. Ngamanye amazwi, lezi kungaba izenzo zakho zansuku zonke, ezingalethi ngisho nomphumela oyifunayo, futhi ziphazamisa ukufeza imigomo yakho, futhi zithatha isikhathi esiningi.
Kunezinhlobo eziningi ze-chronophages, futhi sonke sihlukile nawe, esinezici zethu ezingokwengqondo, okusho ukuthi wonke umuntu angaba nezakhe izinto zokudonsa isikhathi. Ake sibhekisise ezinye zazo futhi sithole ukuthi yini okufanele siyenze ngesikhathi sethu, esingasho lutho, esingenamibandela ukuze sisithole futhi sisikhulule ukuze sixazulule imisebenzi yomsebenzi kanye nokufeza izinhloso esizifunayo.
Kepha ngaphambi kokuthi uhlanganise sonke isikhathi sakho samahhala futhi ukhiphe noma ukwandise ezinye zezenzo ezenziwa njalo, kufanele uqonde ukuthi lokho, ngakolunye uhlangothi, okungenziwa iphutha nge-chronophage, kungaba umthombo wesimo sakho sensiza, lapho okukhona. kulula kuwe ukufeza lokho okufunayo. Ngakho-ke ungajahi ukususa zonke izinsiza zakho ekuphileni ngesikhathi esisodwa. Sondela le nqubo ngokuqonda.
Kuyafaneleka futhi ukwamukela iqiniso lokuthi kunamahora angama-24 kuphela ngosuku. Futhi anginawo umlingo wokuwalula. Konke engizokutshela ngakho kusekelwe kokuhlangenwe nakho kwami.
Ngakho-ke, ake sijwayelane, uma ungakaqagela okwamanje - ukusetshenziswa okungalawulwa kwamanethiwekhi omphakathi - yebo, i-chronophage.Futhi namuhla igcwele yonke indawo. Ngeke ngigxile kulokhu isikhathi eside. Uma umsebenzi wakho oqondile ungaxhomeki ekuxhumaneni nomphakathi, kungcono ukuyithatha njengomthetho futhi ubeke eceleni isikhathi esithile kubo. Isibonelo, ihora ekuseni kanye / noma kusihlwa. Kukuwe ukuthi unqume, into esemqoka ukulawula isikhathi nekhwalithi yokuba khona kwakho ku-inthanethi.
Futhi, kufanele ucabange ngokucophelela ngezinto ozilibazisa ngazo, nokuthi singakanani isikhathi osichitha kuzo.Endaweni ethile endaweni yokuzilibazisa, kungase kube ne-chronophagus. Futhi awudingi ukuyeka ngokushesha, isibonelo, kusukela ekufundeni izincwadi, ngaphandle uma, yebo, isikhathi sebiwe ebuthongweni obugcwele.Okufanele ukwenze nokuthi uqonde kanjani uma umsebenzi wakho wokuzilibazisa uchitha isikhathi? Kimina, indlela yokuhlaziya iyasebenza: okokuqala ngibhala phansi zonke izinto engizilibazisa ngazo, bese ngithola izinzuzo nezinzuzo engizithola ngokuzenza, bese ngibala ukuthi singakanani isikhathi engizinikezela kuzo. Futhi uma ngibona ukuthi akukho okulimaza izinto eziza kuqala kimi, kuhle lokho. Kodwa uma umsebenzi wokuzilibazisa ungithatha isikhathi sami, ngibuye ngicabange ukuthi yini engenziwa. Ngizama ukuthuthukisa isimiso sami ngangokunokwenzeka.
Kukhona futhi "abamosha isikhathi" abangajabulisi njengezinkinga ezidala ukuhlehlisa nokuhlehlisa. Lokhu kufaka ukulungiselelwa kwegoli okungaqondakali, ukungakwazi ukunikeza, ukuzama ukwenza okuningi kakhulu ngesikhathi esisodwa. Nalapha, futhi, ngeshwa, asikho isixazululo sendawo yonke kule ndaba. Uma ngibona ukuthi, ngokwesibonelo, imisebenzi yomsebenzi isinqwabelene, ngakho ngiyibeka phambili. Futhi phakathi nosuku lokusebenza, ngizama ukwenza ngokohlelo, ngenza igxathu negxathu ngokulandelana engikucabangile.
Amagama ambalwa nje mayelana nalawo ma-chronophages, lapho ingekho indlela yokuwakhipha - imigqa nokuminyana kwezimoto. Uma usuvele ukomunye noma kwenye, sebenzisa isikhathi sakho ukuze usisebenzise kahle - lalela i-audiobook noma inkulumo yesitayela se-TED (cishe imizuzu engama-20 yemininingwane ethokozisayo kanye / noma yephrofayili ngesihloko osithandayo), shayela umndeni wakho ucingo. uma ungakhulumanga isikhathi eside. Ngamafuphi, yenza okuthile okuwusizo.
Ekugcineni, funda ukwenqaba lapho kudingekile. Cabanga ukuthi singakanani isikhathi osichithe ngoba wesaba ukubonakala ungenanhlonipho. Khumbula, sakhuluma nawe ekuqaleni ukuthi kukhona amahora angama-24 kuphela ngosuku. Futhi kulokhu, okungenani amahora angu-8 isikhathi sakho sokusebenza, amahora angu-7-8 awokulala, futhi amahora angu-8-9 ashiywe kuzo zonke ezinye izici zokuphila kwakho. Futhi ngifuna ukuba nesikhathi esiningi.
Sazise isikhathi sakho futhi ufunde ukusebenzisa ngokugcwele isikhathi sakho.
Indlela yokubhekana nobuhlungu bokuhlukana: uhlelo lokuvuselela